निषेधाज्ञा के हो ? कैले देखी कसरी लागु हुन्छ ? (पूर्ण पाठ) - DURBAR TIMES
HomePoliticsनिषेधाज्ञा के हो ? कैले देखी कसरी लागु हुन्छ ? (पूर्ण पाठ)
निषेधाज्ञा के हो ? कैले देखी कसरी लागु हुन्छ ? (पूर्ण पाठ)
काठमाडौँ उपत्यकामा यो पाली भने अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्कन नपाइने आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय प्रशासनलाई दिएको अधिकार अनुसार २४ घण्टाको समय दिएर यस्तो आदेश जारी गरिएको हो। यो आदेश भदौ ३ गतेको राति १२ बजे देखि भदौ १० गतेसम्म (एक हप्ता)का लागि जारी भएको छ।
निषेधाज्ञा मा के के छ त हेर्नुहोस्
९. शैक्षिक संस्थाहरू, प्रशिक्षण केन्द्रहरू, टियूशन सेन्टर, भाषा कक्षा लगाएतका जमघट हुने गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न ।
Previous articleकाठमाडौं उपत्यकामा बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा
Next articleकोरोना प्रभावित नतिजा बारे के भन्छन् त विद्यार्थी